अस्पतालको आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द:: Naya Nepal
काठमाडौ । एक चिकित्सकमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि सिरहाको लहानस्थित रामकुमार उमाप्रसाद स्मारक अस्पतालको आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द गरिएको छ । अस्पताल प्रशासनले सूचना प्रकाशित गरी आकस्मिक सेवा १२ घण्टाका लागि र आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा अर्को सूचना नआएसम्मका लागि बन्द गरिएको जनाएको छ ।
काठमाडौ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम०को बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख धीरज शर्मा बस्याललाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । नेशनल पथल्याब बुटवलमा सोमबार गरिएको पिसीआर परीक्षणको क्रममा उहाँलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । रुघाखोकी र ज्वरो आएपछि केही दिनदेखि आराम गरिरहनुभएका नगरप्रमुख बस्यालले सोमबार स्वाब परीक्षण गर्दा आफू सङ्क्रमित भएको पुष्टि गर्नुभएको छ ।
उहाँ अहिले होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ । आफूसँग सम्पर्कमा रहनुभएकालाई सतर्क र सजग रहन आग्रह गर्दै प्रमुख बस्यालले छिट्टै कोरोना जितेर नागरिकको सेवामा फर्किने बताउनुभएको छ । “जनताको सेवामा खटिँदै गर्दा म पनि सङ्क्रमित हुन पुगेको छु, मलाई कुनै अफ्ठ्यारो परेको छैन, कति पनि हत्तोत्साहित नहुन म नगरवासीलाई आग्रह गर्दछु”, उहाँँले भन्नुभयो ।
कोरोनालाई हेल्चेक्रयाइँ नगर्न भन्दै कोरोनाको लक्षणहरु देखिएमा नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न नगरप्रमुख बस्यालले सबैमा अनुरोध पनि गर्नुभयो । तुलसीपुर– दाङको बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेललाई पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।
सोमबार राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वाब परीक्षण गर्दा अध्यक्ष पौडेलसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्मकुमार मल्ल, इञ्जीनियर राजेश देवकोटा, गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी सिद्धबहादुर केसी, बबई गाउँपालिका वडा नं २ का वडाध्यक्ष चिन्तामणि शर्मासहित छ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।
गाउँपालिकाका प्रेस संयोजक प्रेम राम्जाका अनुसार कोरोनाको लक्षण देखिएपछि स्वाब परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । अहिले भने त्यस्तो लक्षण नदेखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा सोमबार मात्रै ४८ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो ।
काठमाडौं । लामो समय अनशनरत रहेका डा. गोविन्द केसीको आज ६४ औ जन्मदिन सामाजिक सञ्जालमा उनका सुभेच्छुकहरुले जन्मदिनको शुभकामना दिइरहेका छन् । तर डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदै गएको छ । सरकारसँग शनिबार मध्यराति ८ बुँदे सहमति भएसँगै डा. केसीले आइतबार बिहान २८औं दिनमा अनशन तोड्नु भएको थियो । चार साता लामो अनशनले स्वास्थ्य कमजोर भएका कारण केसीको उपचार त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आईसीयूमा भइरहेको छ ।
कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भई काममा फर्किएका त्रिवि शिक्षण अस्पतालकै सरसफाइ कर्मचारी विकास नेपालीले उनलाई जुस खुवाएर अनशन तोडाएका थिए । अनशन अन्त्य गर्नुअघि डा. केसीले दुवै पक्षका वार्ता टोलीका साथै शुभचिन्तक तथा सहयोगीलाई धन्यवाद दिएका थिए । डा. केसीका सहयोगी प्रीतम सुवेदीले सरकारसँग भएको सहमतिपत्र पढेर सुनाएका थिए ।
अनशन अन्त्यपछि डा. केसी पक्षका वार्ता टोली संयोजक डा. जीवन क्षत्रीले सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘सहमति गर्नुभन्दा कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण कुरा हो । सरकारले कार्यान्वयनमा इमान्दारी देखाउनुपर्छ । अर्को पटक पनि अनशन बस्न नपरोस् ।’ सरकार र डा. केसीबीच सम्झौता भएपछि नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।